musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kutarisirwa » Kutengesa kwevanhu Imhosva Yepasi Pese
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Vazhinji munhu wese muindasitiri yekufambisa neyekushanya vanogona kubvuma kuti Kutengesa kwevanhu imhosva. UNWTO pasi pehutungamiriri hwazvino yakabvisa Task Force paKushandiswa Kwevabereki kweVana, chii chisiri kubvisa iyi yakakosha nyaya. WTTC yakamira. WTN inoombera chirongwa cheWTTC pakuratidzira rima divi rekushanya, kutengeswa kwevanhu.
The World Kufamba & Yekushanya Kanzuru (WTTC) yakaparura mushumo mutsva mukuru uyo ​​unoratidza kuti chikamu chePasi rose cheKufamba neKushanya chingabatsira sei kubvisa kutengeswa kwevanhu.
Chirevo ichi chinoburitswa nerutsigiro kubva kuCarlson Family Foundation uye inovaka paWTTC's Human Trafficking Taskforce, iyo yakatangwa muna 2019 kuGlobal Summit yayo muSeville, Spain.
Iine chirevo chayo 'Kudzivirira Kubiridzira Kwevanhu: Chiitiko Chekuita cheKufamba neKushanya Chikamu, WTTC inovavarira kusimbisa kubatana pakati pevane chekuita nekugovana nzira dzakanakisa dzekuzivisa pamusoro penzira iyo chikamu chingaite, uye chinoita, mutsauko, kugadzirisa nyika ino. mhosva.
Chirevo ichi chinotsanangura hurongwa hwekutora hutengesi hwevanhu, dzakatenderedza mbiru huru ina: Kuzivisa, Dzidzo & Kudzidziswa, Kutsigira, uye Kutsigira.
Sangano reInternational Labour Organisation (ILO) rakafungidzira kuti pazuva ripi zvaro muna2016, vanhu vanopfuura mamirioni makumi mana pasi rose vakabatwa nekutengeswa kwevanhu.
Denda harina kungoisa mucherechedzo pane kusaenzana kwakambovapo asi rakawedzera. Izvi zvakawedzera kudiwa kwekukurumidzira kwezviito zvakanangwa mukati mekambani yeTravel & Tourism.
Chirevo ichi chinopa mhinduro mukati memubato uye nekunze, sezvo kuomarara kwemhosva dzepasi rose kunoda kuyedza kwakawanda uye kuita kwakabatana kwevanobata, senge nyika, makambani akazvimirira, nemasangano epasi rese.
KuChikamu cheKufamba neKushanya, izvi zvinoreva kusanganisa hunyanzvi hwevose vane chekuita, kusanganisira vakapona, pamwe nemasangano evagari vemo kuti vatange zvirongwa zvekubatana.
Virginia Messina, Senior Deputy President, uye Acting CEO, WTTC vakati: “Kutengeswa kwevanhu imhosva yepasi rose inobata vanotambura, inoramba ichikura nekukanganisa hupenyu hwemamiriyoni pasi rese.
“Uyu mushumo wakakosha unopa hwaro hwebazi reTravel & Tourism kuti uite chikamu chayo kubatsira kurwisa kubiwa kwevanhu. Tichifunga nezvenzvimbo iyi isingazivikanwe munzira yevanotengesa vanhu, isu tinofanirwa kutakura mutoro wedu kuona kuti chikamu cheKufamba neKushanya chinopa nharaunda yakachengeteka uye inogamuchirwa kune avo vanoshanda mukati mayo.
“Pakupedzisira, kufamba chinhu chinounza vanhu pamwechete, uye zvakakosha kuti isu tibatsire kugadzirisa mhosva iyi.
“Chikamu ichi chinoda kubatana uye chinotarisana nekushambadzira mberi zvine chekuita nekutengeswa kwevanhu nekubata vese vane chekuita. Tinovimba kuti mushumo uyu unogona kubatsira pabasa iri. ”
Chirevo chakadzama ichi chinoratidzira kudiwa kwekushanda mukufambisa nzira iyo inosimudzira kunzwisiswa kwemhosva yekutengesa vanhu, kugonesa kuzivikanwa kuri nani, kudzivirira, uye kudzikisira kwesimba uye kukanganisa chaiko kwechikamu ichi, nekuenderera mberi nekubatana kweveruzhinji-kwakazvimirira kuve nechokwadi chekuti matanho akakodzera anotorwa nehurumende kana kubiridzirwa kwevanhu kwaonekwa.
Chirevo ichi chakatangwa pamberi peWorld Day Against Trafficking in Persons (30 Chikunguru), iyo inoratidza kukosha kwekuteerera nekudzidza kubva kune vakapona mukutengeswa kwevanhu.
WTTC inodawo kutenda masangano anotevera nekupa kwavo mushumo unokosha uyu: Carlson, CWT, AMEX GBT, Marriott International, Hilton, Ingle, JTB Corp, ECPAT International, Airbnb, AIG Kufamba, Bicester Village Shopping Unganidzo, Emirates, Expedia Boka, ITF, Ndiyo Penalty, Marano Perspectives.
The World Tourism Network iri kuombera kuedza kweWTTC kugadzirisa iyi yakakosha uye yakasviba nyaya.
Nyamavhuvhu 1, 2021 pa21: 53
Ndatenda Juergan nekutumira izvi. (Ndima yekutanga yaive ne typo kunyange, ndinotenda?) Uye hongu, Kutengesa kwevanhu kwakanyanya Uranda hweVanhu. Uye Kubiridzira kweVana ndiko kunotyisa kwazvo, kunyanya kune avo vanoshandiswa pakujairira zvebonde. https://www.jonwedgerfoundation.org/rains-list Kuwanda kwevanhu vanoziva mhosva idzi dzinopesana nevanhu, kunyanya patinogona kuita kuti dzimire.